Cristiano Ronaldo Oo Magacaabay Labada XIDDIG Ee Uu Ku Dayan Jiray Iyo Kaftanka Uu Raaciyey - Laacib
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo Oo Magacaabay Labada XIDDIG Ee Uu Ku Dayan Jiray Iyo Kaftanka Uu Raaciyey
Cristiano Ronaldo Oo Magacaabay Labada XIDDIG Ee Uu Ku Dayan Jiray Iyo Kaftanka Uu Raaciyey
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa magacaabay labada halyey ee kubadda cagta ah ee uu kaga dayan jiray kubadda cagta, waxaase uu ku kaftamay inuu iyagii dhaafay oo uu ka guulo batay intii uu ku jiray garoomada.
Ronaldo ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta ESPN Brazil, waxa uu ku sheegay in markii uu yaraa uu isku dayi jiray inuu u ciyaaro sida halyeyga ay isku magaca yihiin ee Ronaldo Nazario iyo sidoo kale Ronaldinho oo xilligii uu barbarrayay uu ku dedaali jiray inuu soo minguuriyo qaababkiisa ciyaareed.
Ronaldinho iyo Ronaldo ayaa ka mid ahaa xiddigihii Brazil ee ku guuleystay Koobkii Adduunka 2002, waxaana lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin ciyaaryahannada ugu wanaagsanaa ee soo maray kubadda cagta.
Isaga oo ka jawaabayay su’aal ahayd ciyaartoydii uu ku dayan jiray, waxa uu Cristiano Ronaldo ku jawaabay: “Anigu ma jecli isbarbar-dhigga, waxaan se ku dayan jiray Ronaldo Nazario iyo Ronaldinho Gaucho oo ka tegay raadkooda iyo taariikhdooda.
“Waxa aan odhan karaa, xaqiiqduna tahay, guulaha aan gaadhay ayaaka badan inta ay iyagu ku guuleysteen, laakiin waxay haystaan koobab adduun. Niyad-samaan badan ayaan u hayaa. Waxa aan soo koray anigoo daawanaya. In la yidhaahdo midkee wanaagsanaa iyo midkee kaalinta labaad ah, muhiim ma aha.
“Waxa aan door-bidayaa in aan kaliya idhaahdo iyaga ayaan ku dayan jiray, waxaanay kubadda cagta kaga tageen taariikh qurux badan.”
Cristiano Ronaldo wali kuma aanu guuleysanin koobka adduunka, waxaana uu markiisii ugu dambeeyey ku hamiyayaa inuu u dagaallamo dhamaadka sannadkan 2022 oo lagu qabanayo waddanka Qatar, hase yeeshee isreeb-reeb ayay soo gelayaan walina kama mid aha dalalka usoo baxay.
Xulka qaranka Portugal waxa uu u qaaday laba koob oo ah Euro 2016 iyo UEFA Nations League oo uu sannadkii 2019kii kula guuleystay, waxaana uu dhigay rikoodh ah inuu yahay ciyaartoyga ugu goolasha badan ciyaaraha caalamiga ah, dunida oo dhan.
Ronaldo waxa kale oo uu ku guuleystay shan Champions League oo afar ka mid ah uu la qaaday Real Madrid, saddex horyaal oo Premier League ah, laba horyaal oo LaLiga ah iyo laba horyaal oo Serie A ah. Waxa kale oo u dheer koobab kale oo garab socday kuwan sare ku xusan.
Mohamed bogba says:
Odayga wuuisudayay kupada Ronaldinho inuu keeno
Markaaa odayga dadaal lenahay imika waadaadagee